Farmaajo oo la siiyay digniintii ugu danbeysay | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo la siiyay digniintii ugu danbeysay
Farmaajo, wuxuu dadaal kasta ku bixinayaa in xasaradaha siyaasadeed sii socdan, si doorashooyinku dib ugu dhacaan, dalkana kagta u saaco waddadii colaadaha iyo dagaallada sokeeye, wuxuuna dhagaha ka fureysanayaa digniinta uga imaaneysa saaxiibada Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sida ay ogaatay Keydmedia Online, Farmaajo ayaa wajahaya cadaadiskii ugu xoogganaa ee dhanka amniga la xariira, kadib markii ay si is daba joog ah u soo gaareen dhambaallo sheegaya inuu qaadayo masuuliyadda wixii khalkhal amni ah oo ku yimaada doorashooyinka.
Tan iyo markii uu qarxay khilaafka u dhaxeeya Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo Farmaajo, ee ka dhashay kiiska Ikraan Tahlii Faarax, waxaa Madaxweynaha muddada sharciga ah ka idlaatay, xaafiiskiisa gaaray dhowr bayaan oo ka soo kala baxay Wakiiladda Soomaaliya ee Midowga Afrika, Qaramada Midoobay iyo Midowga Yurub, waxaana lagu wargaliyay inuu khatar ku yahay amniga dalka.
Sida ay KON, u sheegeen ilo xog ogaal ah, Taliyaha ciidanka lugta Uganda Lt. General Muhoozi Kainerugaba, ayaa Isniintii Farmaajo fart aka saaray waraaq u jeedkeedu ahaa, inuu dusha saaranayo wixii amnidarro eek ka dhasha tallaabooyinka ay qaadayaan isaga Kooxdiisa waqtigu ka dhamaaday.
Wiilka Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, wuxuu sidoo kale, Farmaajo u geeyay waraaq ka socotay Museveni, taas oo iyana si gooni ah u taabaneysay joogitaanka Ciidamada Uganda ee Soomaaliya, iyo go’aanno laga qaaan karo, haddii ay sii socdaan xasaradaha siyaasadeed ee Madaxtooyadu falkineyso.
Ciiddanka Uganda waa ciiddanka ugu badan Hawlgalka AMISOM, waxayna ku leeyihiin ku dhawaad 7000 oo Askari oo fadhigoodu yahay Qeybta 1, (Sector 1) oo ka kooban Banaadir (Muqdisho), Goballadda Sh/Dhexe iyo Sh/hoose. Ciidamada Uganda ayaa ka howlgalayay Soomaaliya in ka badan 10 sano.
Kulan ay Golaha Ammaanka ka yeesheen xaaladda Soomaaliya, 17 September 2021, ayay Farmaajo iyo Rooble, labadaba ugu baaqeen in ay khilaafka ku xalliyaan miiska wadahadalka, lana qabto doorasho aan dib u dhac lahayn.
Rooble, dhankiisa, waxaa loo digay inuu ka fogaado arrin kasta oo dib u dhac doorasho sababi karta, maadama uu isagu masuul ka yahay hirgalinta doorashooyinka, waxayse ku taageereen inuu gacantana ku haayo hoggaanka amniga.
Bishii April 2021, Farmaajo, ayaa u socdaalay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, oo lagu tiriyo mid ka mid ah waddama ugu lita amni ahaan, dalalka Africa, isla markaana ay ku sugan yihiin ciidamo nabad ilaalin, si u taageero uga helo, Madaxweyne Felix Tshisekedi, oo ah MW Midowga Afrika, hayeeshee, qorshahaas wuu ku hungoobay.
Farmaajo, wuxuu dadaal kasta ku bixinayaa in xasaradaha siyaasadeed sii socdan, si doorashooyinku dib ugu dhacaan, dalkana cagta u saaro waddadii colaadaha iyo dagaallada sokeeye, wuxuuna dhagaha ka fureysanayaa digniinta uga imaaneysa saaxiibada Soomaaliya.
Ujeedkiisa ugu weyn waa inuu hor istaago dadaallada cadaaladda loogu raadinayo, Ikraan Tahliil, isla-markaana uu gacmaha sharciga ka badbaadiyo eedeysanyasha uu hoggaaminayo Fahad Yaasiin.